Madaxweynaha Falastiiniyiinta oo sheegay in aaysan gorgortan ka galeeynin qadiyadda Falastiin – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas ayaa diiday in uu ka baxo magaalada Jurusalaam ee caasimada Falastiiniyiinta iyo in uu ka baxo qaxootinimada.
Madaxweyne Cabaas oo maalintii shalay hadal ka hor jeediyay Golaha Qaranka Falastiiniyiinta aya si cad ugu horyimid degameeynta ay Yahuudda ka wadaan dhulka Falastiin.
“Haddii ay dhacdo inaan ka baxno Jurusalaam waxay micnaheeda tahay inaan ogolaanay degameeysiga Yahuudda ay ku hayaan dhulkeena, dhamaanteena waxan noqoneynaa qaxooti Caalamka ka tilmaaman” ayuu yiri Madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas oo khudbad xasaasi ah ka jeediyay bilawga fadhigii 23-aad ee Golaha Qaranka Falastiiniyiinta.
Maxmuud Cabaas oo hadalkiisa sii watay aya tilmaamay in hogaamiyasha Falastiiniyiin ay qaadi doonaan tallaabooyin muhiim ah muddooyinka soo socota, laakiin ma uusan sheegin nooca ay talabooyinkaasi noqonayaan.
Madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas ayaa dib u cusbooneysiiyay diidmadiisa ku aadan mowqifkii Mareykanka ee u xaglinayay Yahuudda, sidokalana waxuu raja xuma ka muujiyay wada hadaladi u dhaxeya Falastiiniyiinta iyo Yahuudda.
Heshiiska wda hadalka oo aan si cad loo shaacinin ujeedkiisa, ayaa ku saleysanaa wada hadlo u dhaxeeya Yahuudda iyo Falastiin oo lagu raadinaya xal nabadeed